XUSEEN CAYDIID (WARAYSI)
Goobta uu shirka dib u heshiisiinta Soomaalidu ka socdo ee Magathi oo ku taalla duleedka magaalada Nairobi waxaan waraysi kula yeelanay Eng. Xuseen Maxamed Caydiid oo ah gudoomiyaha SRRC. Su’aashii ugu horaysey ee aannu Xuseen Caydiid weeydiiney oo ahayd bal inuu marxaladda shirku marayo ka warramo, wuxu uga jawaabey sidan:
Xusseen Caydiid & Shaati Guduud
“Anigoo ku hadlaya magaca golaha SRRC, waxaan salaam u soo jeedinayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed. Shirku wuxuu marayaa qaybtii ugu dambaysey oo xasaasiga ah, muddo 8 bilood ahna qaybtii 1aad iyo qaybtii 2aad waan ku guulaysanay, waxaanuna rajaynayaa meelaha ka hadhay qaybta 2aad ee la isku haystana in dhowaan si deg deg ah u dhamayno, waana wax aan sidaas u sii cuslayn oo ay Soomaalidu isaga dhowdahay, marka ay noqoto mabaadii’da dastuurka ku meel gaadhka ah ayaan hadda u fadhinaa sidii la isugu raaci lahaa oo uu shirweynaha uga gudbi lahaa.. mabaadii’ loo wada dhan yahayna oo uu noqdo mid ay Soomaalidu ku meel mari karto gudo iyo dibedba mudada ku meel gaadhka ah”.
SomaliTalk: Mudane waxaad sharaxaad naga siisaa qodobada hadda xasaasiga ah ee inuu shirku cakirmo keentay.
Xuseen Caydiid: Qodobada xasaasiga ah waxaa ka mid ah: Tirada baarlamaanka, yaa xulaya baarlamaanka, cidda lagu salaynayo sida ergada 361ka ah, mise baarlamaan cusub ayaa la soo xulayaa, iyadoo siyaasiyiintii iyo hogaamiyayaalka dhaqanka lala tashanayo. Intaas ayeey ku wareegsan tahay waxyaabaha u baahan in maalmaha soo socdo laga gudbo. Haweenka imisa ayaa baarlamaanka la siin karaa, 25%, 12%, 15%, iwm, waa 3da lambar ee meelahan yaalla. Waxaa kaloo muhiim ah federaalka ma waxaa la aqoonsanayaa gobolada hadda jiro, mise fedreraalka gudiyo ayaa loo xil saarayaa oo dawlad dhexe ayaa la dhisayaa oo gobolada hadda jira waa loo kaadinayaa, iyadoo la tixgelinayo maamul hoosaadka ay dhisteen. Waxaa laga sugayaa daraasadda ay soo suubiyaan 90 maalmood gudahooda, marka la magacaabo gudiga aqoonyahanada ee uu dastuurka ku meel gaadhku qori doono.
SomaliTalk: Marka SRRC halkee bay ka taagan tahay qodobadaas aad sheegtay in laysku mari la’a yahay?.
Xuseen Caydiid: SRRC si guud ayeey qodobadaas meel u saartay, waxay qortay qoraal, iyadoo tix gelinaysa, rabitaanka TNG’da, rabitaanka G8, rabitaanka bulshada rayidka ah, waxaan isku daynay wixii mar walba dan u ah dadka, dalka iyo diintaba in aan qabano. Waxaan isku daynay balaarinta baarlamaanka 450ka oo ay TNG iyo G8 bishii December 2002 soo bandhigeen inaan uga tanaasulo oo aan ogolaanay. Waxaana ugu dambeeyey aniga iyo Muuse Suudi, waana saxiixday 450kii. Wixii aan saxiixnayna inaan ogolaano waaye, sidaas ayeeyna SRRC ku shaqaysay, laftigiisuna waa soo jeedin oo dhinacaygu aad uguma dhegana, isaga waan ogolahay, haddii uu adduun weynu diidaan oo markaa Soomaalida lagu soo celiyo waxaan diyaar u nahay lambarkii kale ee ay Soomaali ku heshiin karto. Marnaba anagu lambar kuma dhegenin, hase yeeshee hadda waxaan ugu dheganahay oo keliya raggii aad shalay isla ogolaateen yeey ka bixin iyadoo wakhtigan la joogo oo yaan dood kale dib loogu noqon. Waxaan ka baqaynaa in haddii aan lambarkaa ka tango ay ragii G8 iyo TNG ay yidhaahdaan balantii waad nooga baxdeen oo ay carqalad kale oo bilo qaadataa timaaddo. Taas macneheedu maaha SRRC 450 bay ku dhegan tahay, waxaan diiddanahay lamabar ay shalay TNG iyo G8 naga codsadeen markii aan ogolaanay inay haddana nooga baxaan, oo 250 hadda qaarkood baa raba, haddaan 250 ogolaanana waxay dhihi doonaan balantii 450ka ayaad nooga baxdeen oo aad saxiixdeen, marka murankaas wareegga ah ayaan diiddan nahay inuusan dhicin.
SomaliTalk: Ujeeddada murankan wareegaysanaya maxaad ku qiyaasi kartaa?.
"...ragga qaar ka mid ahi inay rabaan oo doonayaan inay wakhtiga lumiyaan".... "waxaana cad inay ragaaasi diiddan yihiin inay dawlad Soomaaliyeed dhalato. " Xuseen Caydiid
Xuseen Caydiid: Waxaan ku qiyaasi karaa ragga qaar ka mid ahi inay rabaan oo doonayaan inay wakhtiga lumiyaan. Soomaaliyana sidaad u ogsoon tihiin maraykanka, Raashka, Shiinaha, gudiga 9ka ah, gabadha Fartuun oo dawladdii hore masuulka uga ahayd UN’ka, waxay qortay qoraal shirkii Djibuti, qoraalkaas qof ka hor yimid ma jirin sidaas ayuu aqoonsigii UN’ku ku yimid, aqoonsigaas oo UN’ka yaal maanta Soomaaliya wanaag buu u yahay waana wax ka mid ah waxyaabihii Carta ka soo baxay, wuxuu dhacayaa 27da bisha Ogost, hadduu dhaco waxaan u gudbaynaa wixii aan ahayn markii TNG’da la suubiyey. Taasi waxay fududaynaysaa inaan iyada lagu mashquulin intii wax kale la qaban lahaa, oo aqoonsi waan haysanaa haddii aan 27da ka hor ku guulaysano najaxaadda shirka. Rag baa diiddan marka oo mar kasta carqalad la imanaya, waxaana cad inay ragaaasi diiddan yihiin inay dawlad Soomaaliyeed dhalato.
SomaliTalk: Waa caadada siyaasiyiinta Soomaalida inay kooxiba koox kale ku eedayso inay diidan tahay dawlad Soomaaliya ka dhalata, marka aragtidaadan kooxaha qaar ku eedaynaysa inay dawladnimada diidan tahay soow sidaas oo kale maaha?.
Xuseen Caydiid: Maya, haddeer waxaan ka imid baarlamaanka Talyaaniga, wasiirka arimaha dibedda iyo bulshada caalamka si gooniya ayeey noogu aqoonsatay markii la isku deyey in shir kale oo dhan ka ah shirka Mbgathi laga garab furo, aad ayaa naloogu hambalyeey 8dii bilood ee aan shirkan fadhinay ururka SNA/SRRC oo aan marna ka tegin, marna xabad joojintii la isla gaadhay jebin. Mar kasta waan ka hor imanayney qolo kasta oo isku dayday inay shirka bur-buriso. Xitaa G8 isku xidhkooda bud-dhig inaanu u ahayn ayuu adduun weynuhu noo aqoonsaday, gaar ahaana waa naloogu mahad celiyey, wasiirka arimaha talyaniga, golaha baarlamaanku way noogu mahadnaqeen, qoraalkeediina way na soo siiyeen. Mar walba waxaan ku dadaalaynaa inay Soomaaliya nabad iyo dawladnimo hesho, taasna wax kastaan u maraynaa, tanaasul kastaan u samaynaynaa. Xitaa waxaan diyaar u nahay inaan talaabo gadaal u qaadno si ay Soomaaliya dawladi ugu dhalato.
SomaliTalk: Talyaaniga oo ka mid ah dawladaha siyaasadda Soomaaliya lugta ku leh ayaad dhowaan safar ku tagatay, sidee buu yahay mawqifkooda Soomaaliya ku aaddan?.
Xuseen Caydiid: Talyaaniga intaan ogahay, wixii ka dambeeyey shirkii IGAD waxay aad siyaasaddooda isu bedeshey markii uu xisbiga cusubi dawladdda qabsaday, sidaad la socoto 13 sano ee aan dagaalka sokeeye ku jirey Talyaniguna wuxuu ku jirey dagaal gudaha ah, mana u suurta gelin inay siyaadiisu degto. Markii ugu horeysey oo dawlad Talyaani ah 5 sano la doorto haddana xisbi Soomaaliya yaqaanna oo xisbigii Soomaliya soo guumaystey ay aqlabiyadda ku guulaystaan weeye. Taasi waxay keentay marka in siyaasad cusub oo Talyaani ahi ay dhalato, waxaana ka sii dhalatay in markii ugu horeysey nalagu marti qaado aniga iyo Alle ha u naxariistee Gen. Gabyow inaan tango, inaan kala hadalo wixii 13ka sano dhacay, SRRC inay ka qayb qaadanayso nabadda, kana shaqaynayo isu soo dhowaanshaha TNG, bulshada rayidka ah iyo ururada kaleba. Arintaasna inuu Talyaanigu tixgeliyo haddii ay Soomaali heshiiso oo uu qorsho siyaasadeed iyo qorshodhaqaale iyo qorsho nabadgelyaba ay horumariyaan oo haddii taas la helo uu Talyaanigu ka baxayo cabashadii aan 13ka sano ka cabanayney inuu qayb ka ahaa dhibaatada ama uusan nabadda soomaaliya waxba uga qaban sida ay dawladaha Ingiriiska iyo Faransiisku ugu gurmadeen wadamadii ay guumaysan jireen. Marka Talyaanigu hadda diyaar ayaan u ahay buu yidhi, baarlamaakuna bidix iyo midigba inay istaageen bay nagu yidhahdeen waxaan idiinku hambalyaynaynaa nabadda aad ka shaqaynaysaan haddaad tihiin hogaamiyayaasha SRRC iyo weftigaad wadidba. Waxaa kaloo ila socday wefti TNG oo uu hogaaminayey Cali Axmed Caraale, sidoo kale Puntland waxaa ka socday Seef oo ah nin aqoonyahan oo dhalinyaro ah, arrimaha dibeddana Puntland u xilsaaran. Waxaa kaloo ila socday wefti RRA’da ka socda oo Bay iyo Bakool ka yimid. Sidoo kale waxaa weftiga ka mid ah wafuud Kismaanyo ka socota. Intayadaas oo wakiil waxaan u sheegnay inaan ku soo wada heshiinay Mbagathi , waxaanuna u sheegnay Talyaanigu marka dawlada Soomaaliyeed aan dhisano inay u soo gurmadaan.
SomaliTalk: Waxaad ka tirsan tahay ragga isu taagay tartanka jagada madaxweynanimada Soomaaliya, marka maxaad is leedahay waad kaga duwan tahay musharixiinta kale?.
Xuseen Caydiid: Musharixiinta kale ee Soomaliyeed waxaan kaga duwanahay anigoo kuwooda ugu da’ada yar ka mid ah, 41 sano ayaan jiraan, waxaan kaloo kaga duwanahay waxaan dhashay wakhti ay Soomaaliya xor ahayd 1962dii, waxaan kaloo kaga duwanahay waxaan ahay nin dibedda wax ku soo bartay oo la soo shaqeeyey wadamada "supper powerka" sida Maraykanka, California oo awood u yeeshay inaan 17sano wax ku soo barto, maamulkoodana ilaa 10 sano ka soo shaqeeyey, kan ciidamada iyo kan injineerinkaba. Waxaan kaloo kaga duwanahay 7 sano waxaan ka soo shaqeeyey maamulkii Sal-ballaar iyo nabaddii kala duwanayd ee gobolada Koonfureed, khadka cagaaran ragii nabadiisa ka soo shaqeeyey ayaan ka mid ahaa.
Ninkii ugu horeeyey ee tanaasulo isagoo ay 3 sano u harsan tahay ayaan ahay, kana tanaasulay madaxweynanimo ayaan ahaa, anigoo u danaynayey soomaali nabadeeda. Waxa kale ee aan kaga duwanahay waxa weeye anigu waxa aan ahay nin mar walba danaynaya awooda dadweynaha dimuqraadiyadda, muhiimadda ay leedahay nin ku soo koray ayaan ahay. Waxaan ahayn nin danaynaya inay soomaaliya ka baxdo xiligii 40ka sano oo ama ciidan maamulayey ama ay aad u liidatay, in la helo dhaqaalaha xorta ah oo aysan Soomaaliya weligeed yeellan. Waxaan kaga duwanahay nin rumaysan baan ahay inaan nahay dad afrikaan ah oo taariikh leh, oo 2000 oo sano ka hor Giriigga la shaqaysan jirey inaan nahay oo dhaqan leh, oo haddana aaminsan inay Soomaalidu tahay dad magac dheer leh. Waxaan kaloo aaminsanahay inay Soomaalidu tahay dad horumar samayn kara, dad wax qabsan kara. Dagaalkan sokeeye ee ina haystaa kama duwana kii Yurub iyo Amerika ka dhacay. Keenu waaba 13 sano oo aad buu u yar yahay, Illaahay ha inaga saaro si aynu ugu gudubno wakhti horumar leh.
SomaliTalk: Waxaa la is weeydiinayaa haddii uu Xuseen hankiisa ku guulaysto, xagee buu wax-qabadkiisa u badin doonaa.
Xuseen Caydiid: Meelaha ugu muhiimsan oo aan is leeyahay wax baad ka qaban doontaa waa horumarinta dhaqaalaha, horumarinta nabadda marka ay noqoto in la gaadhsiiyo gobolada iyo degmooyinka, qaybta kaloo aad iila muhiimsan oo aan jeclahay inaan adduun weynaha ka dhaadhiciyo waa hub ka dhigista maleeshiyooyinka hubaysan iyo habaynta iyo dhisidda ciidamada booliska iyo ciidamada xoogga dalka, horumarinta aqoonsiga adduun weynaha, xiriirka siyaasadda cusub ee caalamka ka socota nin aad ula socda ayaan ahay oo ku soo koray, kuna soo shaqeeyey, waxaas oo dhan wax badan baan ka qaban karaa. Soomaalida dibedda ku noolna nin dhibka ay qabaan ka war qaba ahay, wax badan ayaan isku xirka shacabka dibedda aaday iyo inay dhulkooda usoo laabtaan, marka aan hor fadhiisto caalamka nin gudbin kara waxa ay maanta Soomaaliyi ku sugan tahay ayaan ahay.
Waxaa waraysay Ibraahim Maxameddeeq
WARARKII UGU DAMBEEYEY EE SHIRKA NAIROBI
Habsami u socodkii shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ayaa hakad galay kaddib markii ay hogaamiyaasha soomaalida isku mari waayeen qodobo ka mid ah axdiga ku meel gaadhka.... akhri warbixintii Ibraahim.Maxameddeeq June 28